Wararka - Lixaadkii Shiinaha-Ruushka, Harbin, Shiinaha
Carbin International Economic and Trade Fair (oo loo soo gaabiyo HTF), oo la aasaasay 1990, ayaa si guul leh loogu qabtay 29 sano oo isku xigta. Ujeedada "Iftiiminta Ruushka, wajahaysa waqooyi-bari Aasiya, Raadinta Dunida, U adeegida Shiinaha oo dhan", HTF waa mid ka mid ah bandhigyadii ugu dheeraa ee si isdaba joog ah loogu qabto Shiinaha, iyo sidoo kale daaqad Shiinaha ah oo lagu horumariyo suuqyo caalami ah oo kala duwan iyo muhiim madal iskaashiga gobolka Waqooyi-bari Aasiya. Sanadkii 2014, HTF waxaa si guul leh loogu casriyeeyay Shiinaha-Ruushka Expo, oo la qabtay shan sano oo xiriir ah.
30th Bandhigga Caalamiga ah ee Ganacsiga iyo Ganacsiga Caalamiga ah ee Harbin waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Caalamiga ah ee Harbin Carwada iyo Xarunta Isboortiga laga bilaabo Juun 15 illaa 19, 2019. Iyada oo aagga bandhigga ah 86,000㎡, waxay dejineysaa International iyo Hong Kong, Macao iyo Taiwan Pavilion, Iskaashiga Shiinaha iyo Ruushka. Taambuugga, Mashiinnada iyo Alaabada Korontada Taambuugga, Aagga Carwooyinka Makiinadaha waaweyn iyo wixii la mid ah. Bandhigu wuxuu ka hadlayaa natiijooyinka mashruuca ee kheyraadka macdanta, beeraha casriga ah, soo saarista qalabka, aerospace, ganacsiga e-xuduudaha, ganacsiga adeegga iwm. Is-weydaarsiyo taxane ah oo dhaqaale iyo ganacsi, gorgortan iyo iswaafajin, xayeysiin, sida shirarka, shirarka ayaa loo qaban doonaa si waafaqsan.
HTF waxaa si qoto dheer loogu dhex biirin doonaa "Belt and Road Initiative", waxaa la dhisayaa meel sare oo iskaashato furan, oo ciyaar buuxda siisa faa'iidooyinka muhiimka ah ee goobta waqooyiga bari ee Aasiya, iyadoo si ballaadhan loogu casuumo dawladaha iyo shirkadaha ka kala socda adduunka oo dhan inay ka soo qayb galaan bandhigga iyo kor u qaadida is-weydaarsiga is-weydaarsiga suuqa caalamiga, raasamaalka iyo teknolojiyadda
Waxaa si xushmad leh lagugu martiqaaday inaad kaqeyb gasho 30-kath Carbin Trade Fair si loo wadaago fursadaha ganacsiga loona raadsado horumar guud. Waxaan siin doonnaa adeegyo dhan walba leh oo tayo leh oo loogu talagalay bandhigayaasha ka imanaya gudaha iyo dibaddaba.
Waqtiga Bandhigga: 8: 30-17: 00 Juun 15 ilaa 18, 2019
8: 30-14: 00 Juun 19, 2019
Waqtiga Galitaanka Bandhigga: 7:30 Juun 15, 2019
8:00 Juun 16 ilaa 19, 2019
Maalinta Wada-xaajoodka ee Soo-booqdayaasha Xirfadlaha ah: Juun 15, 2019
Maalinta Furitaanka Dadweynaha: Juun 16 ilaa 19, 2019
Bandhigga Shirka Caalamiga ah ee Harbin iyo Xarunta Ciyaaraha
(Lambarka 301 Hongqi Str., Nangang Distr., Harbin, Shiinaha)
86,000 ㎡ (3000 waabab caalami ah)
HORDHAC LOOGU TALAGALAY BARNAAMIJYADA BULSHADA IYO BULSHADA
International, Hong Kong, Macao iyo Taiwan Pavilion
Tiknoolajiyad sare oo cusub, wax soo saarka gaarka ah ee gobolka, maalgashiga iyo iskaashiga mashaariicda, is weydaarsiga dhaqanka iyo wixii la mid ah ee ka yimid dibedda iyo Hong Kong, Macao, Taiwan.
Teendhada Iskaashiga Shiinaha iyo Ruushka
A. Aagga Sawirka Qaranka Ruushka. Muuji muuqaalka qaran ee Ruushka iyo sidoo kale iskaashiga ka dhexeeya shirkadaha muhiimka ah, Meelaha la xiriira iyo Gobollada Shiinaha.
B. Aagga Iskaashiga Gobollada Shiinaha iyo Ruushka. Muuji xaalada guud ee warshadaha waxtarka leh iyo horumarka maxalliga ah ee gobollada Shiinaha (magaalooyinka) iyo buuraha Ruushka (gobollada)
C. Aagga Bandhigga Mawduuca. Shirkadaha Shiinaha iyo Ruushka waxay si buuxda u muujinayaan natiijooyinka mashaariicda iskaashi ee u dhexeeya labada dal dhinacyada muhiimka ah sida iskaashiga macdanta, beeraha casriga ah, soo saarista qalabka, aerospace, ganacsiga xuduudaha isaga gudba, warshadaha dhaqanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
D. Aagga Soo Noolaynta Baaxadda Leh. Soo bandhig cilmiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda, adeegyada maaliyadeed, dalxiiska iyo qalabka barafka iyo barafka, daryeelka caafimaadka deganaanshaha, tafaariiq cusub iyo adeegsi cusub, qalabka dhismaha cusub ee Gobolka Heilongjiang.
Mashiinka iyo Alaabada Korontada Taambuugga (Teendhada Carwada)
Xirxirida iyo daabacaadda mashiinada, makiinadaha caaga ah, mashiinada alwaaxa, qalabka wax soo saarka biyaha, wadada, buundada, dhismaha iyo makiinadaha miinooyinka iyo qeybaha, marinta mashiinada iyo mashiinada wax lagu rakibo, qalabka qalabka, qalabka gawaarida, qalabka saadka iyo qalabka silsiladaha iyo teknolojiyada iyo alaabada kale ee qalabka.
Aagga Carwooyinka Mashiinnada Waaweyn (Aagga Bandhigga Bannaanka)
Mashiinnada dhismaha, mashiinnada beeraha iyo dhirta, tikniyoolajiyadda tamarta biomass iyo qalabka, gawaarida waaweyn ee rakaabka iyo xamuulka, gawaarida rakaabka, qalabka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose, qalabka gurmadka, goobaha firaaqada dibadda iwm.
WAXQABADKA GANACSIGA WEYN
Si wada jir ah u abaabulaan shirar, aqoon isweydaarsiyo iyo nashaadaadyo kale oo ganacsi oo ku saabsan beeraha, keymaha, mashiinada, ganacsiga ganacsiga, nadiifinta kastamka, saadka gaadiidka, dalxiiska dhaqanka, is weydaarsiga dhalinyarada, horumarinta ilaha, wax soo saarka farsamada; Isla mar ahaantaana, "The 30thSannad-guurada HTF "iyo taxane kale oo caalami ah oo caalami ah oo gaar ah iyo ganacsi, saynis iyo teknolojiyad, dhaqdhaqaaqyo is-weydaarsi dhaqan ayaa la qaban doonaa.
KA QEYB GALKA
Bandhigyaashu waxay iska diiwaangelin karaan khadka tooska ah iyada oo loo marayo bogga rasmiga ah (www.chtf.org.cn), waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelintu waa Abriil 30, 2019.
A. Hall A, B iyo C
1. Teendhooyinka caalamiga ah ee 9㎡ （3m × 3m） waxaa laga heli karaa US $ 1,500 midkiiba inta lagu guda jiro bandhigga. Waab kasta oo gudaha ka mid ah waxaa loo fududeeyay 3 qaybood oo looxyo ah, miis, 3 kursi, 2 nalalka tooska ah, koronto koronto oo ah 220V / 3A (500W gudahood), loox ka sameysan luuqad ay ku qoran yihiin Shiinaha iyo Ingiriisiga.
2. Waabab heer sare ah oo la qurxiyay oo 9㎡ （3m × 3m） ah oo leh shuruudo ugu yar oo ah 36㎡marka bandhiggu socdo iyo kordhinta 9㎡ ayaa laga heli karaa US $ 1,900 midkiiba inta lagu gudajiro bandhigga. Qol kasta oo gudaha lagu qurxiyo oo lagu qurxiyo waxaa loo fududeeyay 3 qaybood oo looxyo muujinaya ah, miis, 3 kursi, qayb rooga ah, 2 nal, aalad koronto oo ah 220V / 3A (500W dhexdeeda), loox ka samaysan oo leh magac Shiinaha iyo Ingiriis ah soo bandhigid.
3. Bandhiga gudaha oo dhul banaan ah ayaa laga heli karaa US $ 155 / ㎡ iyadoo shuruudaha ugu yar laga doonayo 36㎡qiyaasta bandhiga oo la kordhiyo 18㎡, iyada oo aan lahayn aalado lagu soo bandhigo.
B. Mashiinka iyo Alaabada Korontada Taambuugga T Teendhada carwada）
Midkiiba 9㎡booth qiimihiisu waa US $ 900 inta lagu gudajiray bandhigga. Booth kasta waxaa loo fududeeyay 3 qaybood oo looxyo ah oo soo bandhigaya, miis, 3 kursi, 2 nalalka tooska ah, koronto koronto oo ah 220V / 3A (500W gudahood), loox ka kooban luuqad leh Shiinaha iyo Ingiriis magaca bandhiga.
C. Aagga bandhigga bannaanka waxaa laga heli karaa US $ 30 / ㎡ inta lagu guda jiro bandhigga, aagga ugu yar ee la kireysan karo waa 50㎡, ma leh xarumo bandhig iyo koronto ayaa la siiyaa.
1. Waxaa si naxariis leh lagaa codsaday inaad kirada u soo celiso kirada ka hor bisha Meey 15, 2019. Dib u dhac kasta oo ku yimaada dirista kirada kor ku xusan waxaa loo tixgelin doonaa ka noqosho iskaa wax u qabso ah oo ka socota carwada, iyo waab loogu talagalay adiga ayaa dib loo habeyn doonaa.
2. Lacag-bixiyaha: Xafiiska Maamulka ee Shiinaha Carbin Carwo Dhaqaale iyo Ganacsi
3. Bangiga Koontada ee Doolarka Mareykanka: Bangiga Shiinaha, Laanta Heilongjiang
4. Ku dar: Maya. 19 Hongjun St., Nangang Dist., Harbin Shiinaha
5. Lambarka Koontada: 166451764815
6. XEERKA SWIFT: BKCHCNBJ 860
1. Kaarka Exhibitor: waab kasta oo heer sare ah (9㎡) waxaa lagu fududeynayaa 3 kaar, 50㎡ kasta oo ka mid ah aagga bannaanka lagu soo bandhigo waxaa lagu fududeynayaa 6 kaar.
2. Booth Setup iyo Dismantling Card: 30 yuan ayaa laga qaadaa kaar kasta. (Xusuusin: Bandhigyaashu way ku soo guuri karaan oo ku kala bixi karaan iyagoo soo bandhigaya kaararka ay ku soo bandhigayaan)
3. Diyaarinta Booth iyo Kaarka Baabi'inta ee Gaariga: gaariga loogu talagalay soo bandhigista iyo kala furfurista kaliya 50 yuan ayaa laga qaadayaa kaar kasta
4. Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan tixraac http://www.chtf.org.cn
CASHARKA BUUFADA IYO KA QAADISTA
1. Dejinta waab iyo kala furfurida waqtiga:
08: 00 Juun 8 illaa 12: 00 Juun 14: Qalabka is-qurxinta ee is-qurxinta
08:00 Juun 12 illaa 12: 00 Juun 14: Dejinta waababka caadiga ah
12: 00 Juun 14: Hoolka carwadda waa loo xiri doonaa baaritaanka amniga
15:00 Juun 19-18: 00 Juun 20: Burburinta Booth
2. Dejinta waababka is-qurxinta ee dejintu waxay hirgelisaa farsamooyinka marin u helidda dhismaha waxayna si adag u raacdaa "Dhismaha iyo Maareynta Maareynta Naqshadeynta Shiinaha iyo Ruushka" Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan tixraac http://www.chtf.org.cn
3. Waababyada is-qurxinta, dhammaan howlaha dejinta waa in lagu sameeyaa bannaanka hoolka bandhigga waxayna ku shiri karaan hoolka. Dhererka bandhiga ee waababka gudaha lagama badin karo 6 mitir.
4. Fadlan noo soo gudbi qorshaha sagxadda dejinta ee istaandarka caadiga ah ama kala-furidda sawirka guddiga go'doomin ee u dhexeeya waababyada Guddiga Abaabulka Expo kahor 31-ka Maajo. Haddii wax isbeddel ah la sameeyo ka dib dhammaystirka waabaska, shaqada dejintu waa inaan la qaban illaa iyo inta codsiga la oggolaanayo oo lacag dheeraad ah la bixinayo wixii ka dambeeya Juun 8th.
5. Inta lagu guda jiro dejinta waab, looma oggola inay qabsato meelaha dadweynaha ama laga hortago qalabka ka hortagga dabka. Bandhigyaashu waa inay si dhakhso leh u nadiifiyaan dhammaan qashinka dejinta iyo qalabka wax lagu duubo.
6. Carwooyinka la soo bandhigo inta carwadu socoto lama ogola.
1. Bandhiggu wuxuu bixin doonaa khuseeya adeegyada loogu talagalay soo-bandhigayaasha iyo booqdayaasha sida la-tashiga, gorgortanka ganacsiga, bixinta iyo dalbashada macluumaadka lagu sii daayo internetka, iwm.
2. Bandhiggu wuxuu bixin doonaa khuseeya adeegyada loogu talagalay dadka wax soo bandhigaya sida hudheel jaale, shaqaaleysiinta turjubaanka, kireynta baabuurta, safarka, iwm.
3. Xarunta Adeegga ee ku taal teendhada waxay bixisaa adeegyadan soo socda: kireynta xarumaha bandhigyada, boostada, tikidhada, bangiga, isgaarsiinta, shabakadda, xarunta ganacsiga, iwm.
4. Waaxyada qaar sida Kastamyada, Kormeerka & Karanaynta, Warshadaha & Ganacsiga, Kormeerka Tayada, Xuquuqda Hantida Maskaxda, iyo Sharciga ayaa bixin doonta adeegyada goobta, oo ay ku jiraan la tashiga sharciga iyo siyaasada, xalinta dhibaatooyinka iyo khilaafaadka inta uu socdo Bandhiga.
5. Bandhiggu wuxuu bixin doonaa adeegyo loogu talagalay kuwa wax soo bandhiga sida dhismaha websaydhka dhismaha iyo dayactirka, baaritaanka macluumaadka soo bandhigaha, iwm.
Guddiga Abaabulka wuxuu siiyaa bandhigyada adeegga saadka ee soo-bandhigayaasha.
Xiriirada: Mrs. Chen Dibno
Fakis: + 86-451-82345874
Bandhiggu wuxuu bixin doonaa adeegyo xayeysiin ah oo loogu talagalay dadka wax soo bandhigaya, oo inta badan la macaamilaya xayeysiinta gudaha iyo dibedda hoolka bandhigga, waddooyinka waaweyn ee Harbin, Buugaagta Tilmaamaha Carwada, tikidhada gelitaanka iyo websaydhka rasmiga ah.
Xiriirrada: Mr. Zhang Jianxun
Fakis: + 86-451-82273913
DIIWAAN GELINTA SHAQAALAHA KAALKA
Xiriirrada: Mr. Wang Zhijun
Fakis: + 86-451-82340226
Waxay mas'uul ka tahay faafinta iyo dhiirrigelinta soo-bandhigayaasha, warbixinta firfircoon ee bandhigga; Diyaarso wareysiyo gaar ah oo lala yeesho martida muhiimka ah iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiyada warbaahinta guud ee gudaha iyo dibaddaba.
Xiriirrada: Mrs. Zhang Yuhong
Xiriirrada: Mrs. Liu Yang
Xafiiska Shirka iyo Bandhigga Heilongjiang
Ku dar: No.35 Meishun St., Nangang Dist., Harbin Shiinaha 150090
Fakis: + 86-451-82345874, 82340226